Nhau - Nei Ruzhinji rwevanhu Ruchisarudza SPC Flooring?
Nei Vanhu Vazhinji Vachisarudza SPC Flooring?
SPC ibwe repurasitikichakagadzirwa nepolymer polyvinyl chloride uye nebwe sezvinhu zvikuru mbishi zvinhu. Mushure mekudziya kwepamusoro-kwepurasitiki kwepepa rakabuditswa, iwo mana ma roller calender uye anopisa iyo firimu firita yekushongedza uye yekupfeka isingagadzirike, uye inogadziriswa nemvura-yakatonhorera UV yekupenda pendi yekugadzira mutsara. Iyo haina inorema simbi formaldehyde uye zvinhu zvinokuvadza, uye iri 100% nharaunda inoshamwaridzika pasi isina formaldehyde.
Semhando nyowani yepasi yekushongedza zvinhu, SPC ibwe-epurasitiki pasiiri kukura pamwero wakakwira kwazvo gore rega rega uye inoshandiswa munzvimbo zhinji senge kindergartens, zvikoro, zvipatara, nzira dzepasi pevhu, dzimba dzekurovedza muviri, mabhazi, uye nhandare. SPC uriri ane mikana yakawanda pamusoro zvimwe uriri kushongedzwa zvinhu, uye rave nevakawanda kuzivikanwa uye kushandiswa mumunda tooling.
Zvese SPC uriri uye hardwood pasidzakachengeteka, asi mutengo wacho hauna kuenzana. Mutengo wepasi pehuni hwakasimba hwakareba. Mutengo weSPC uriri inokodzera ruzhinji rwevanhu uye zvakanyanya padhuze nevanhu. SPC uriri iri nyore kuisa, hapana keel inodiwa, hapana kumonana, hapana musono, hapana ruzha rwusina kujairika.
Kubatsira kwe hardwood uririndeyekuti iri yepamusoro-giredhi uye yakawedzera kusununguka, zvinoenderana nechiitiko icho chakarimwa nevanhu vazhinji kwemakore mazhinji. Nekudaro, nekuda kwehunhu hwehunhu hwehuni pachayo, zviri nyore kwazvo kupfeka uye kunyorova, uye ichaonekwa ichiputika uye kutsemuka kana ikashandiswa kwenguva yakareba. , Hazvina kunaka kutsiva uye kugadzirisa.
Iyo SPC pasi ine zvakawanda zvakanaka, senge yakakwira kuchengetedzwa kwenzvimbo; isina mvura uye hunyoro-chiratidzo; tupukanana uye mothproof; kupisa kukuru kwemoto; kunzwiwa kwakanaka kwezwi; hapana kutsemuka, hapana kushanduka, hapana kuwedzera kwekushisa kana kudzora; mutengo wakaderera; nyore kuisa Kugadziriswa; haina zvinhu zvinokuvadza senge formaldehyde, simbi dzinorema, phthalates, uye methanol. Iko kusakosha kweSPC ndeyekuti kuwanda kwacho kuri kurema, uye mutengo wekufambisa wakakwira zvakanyanya; iyo ukobvu hwakaonda, saka pane zvimwe zvinodiwa kuti ivhu rirambe richienzanisa.
Kuvakwa kwePSC dombo repurasitiki repasi kuri nyore, iyo nguva yekuvaka ipfupiswa, uye mutengo wekugadzirisa wakaderera. Rutsoka runonzwa kugadzikana, richipa vanhu manzwiro anodziya uye akasununguka. Icho chinhu chakareruka, kunyanya chakakodzera kuvakwazve kwezvivakwa zvepamusoro-soro kana dzimba dzekare, uye huremu i1 / 20-1 / 30 yehuremu hwebwe renzvimbo imwechete. SPC ine nani kupindirana, chromatic aberration, uye pateni kudzikama yakatsiga kupfuura ibwe. Ruvara rwakafuma, kushongedza kwakasimba, uye kusarudzwa kwemavara kwakafara. Ruzha rwepasi rwakaderera pane dombo, kufamba kwakachengeteka, uye kunogona kugadzira nharaunda yekugara iri nani kune vashandisi.
Post nguva: Aug-31-2021